BytaFont 2: ovao ny fonon'ny fitaovanao (Cydia) | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | Cydia, iOS 7, iPad
Ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra momba an'i Apple ao amin'ny iOS 7 dia ny fandinihan'izy ireo rehefa nisafidy izay endri-tsoratra Izy io no hitarika ny rafitra fandidiana. Ny endri-tsoratry ny rafitra miasa dia tena zava-dehibe satria hanome estetika tena ilaina io raha mampitaha fitaovana. Raha ny hevitro, heveriko fa nisafidy tsara ny fonon'ny iOS 7 i Apple satria manana minimalism araka ny endriny izy. Fa… Ahoana raha tsy tiantsika izany ary te hanana endritsoratra hafa tianao kokoa isika? Raha manana jailbreak ianao dia afaka misaotra amin'ilay fanovana BytaFont 2 izay nohavaozina ora vitsy lasa izay manohana ireo fitaovana chip iOS 7 sy A7. Raha te hahafantatra ny fomba fiasan'ny BytaFont 2 ianao dia tohizo ny famakiana.
Ilay tweak ahafahantsika manova ny endritsoratra ao amin'ny iOS: BytaFont 2
BytaFont 2 dia tweak maimaimpoana tanteraka hita ao amin'ny trano fitehirizana Modmyi. Andao hojerentsika ny fomba fiasan'izy io.
Ny zavatra voalohany ilainao dia ny mametraka ny tweak. Raha vantany vao tafapetraka ianao dia hanana kisary vaovao amin'ny tabilao antsoina hoe: «BytaFont 2«. Ny fotoana voalohany hanokafanao ny rindranasa dia haharitra kelikely satria tsy maintsy manamboatra kopian'ny backup misy anao ianao alohan'ny hametrahana ilay tweak. Raha mainty mandritra ny segondra vitsy ny lamba dia milamina fa ara-dalàna izany.
Raha vantany vao misokatra ny fampiharana dia tsy maintsy mandeha any Cydia indray ianao ary eo amin'ny farany ambany dia safidio ny menio "Sections" ary tadiavo ny fizarana antsoina hoe "Font (BytaFont 2)". Zava-dehibe!: Ireo endritsoratra azo ampiasaina (satria tohanana izy ireo) ao amin'ny ByteFont 2 dia ireo hita ao amin'ilay fizarana voalaza etsy ambony. Rehefa tafiditra ao amin'ilay faritra ianao dia zahao ireo loharanom-pahalalana hafa misy ary rehefa nifidy ilay tianao indrindra ianao dia apetraho amin'ny fipihana ny "Install" eo ankavanan'ny efijery.
Rehefa manana ByteFont 2 napetraka isika ary alaina amin'ny endritsoratra (ary napetraka) dia tonga ny fotoana hampidirana ilay rindranasa izay nampiana tao amin'ny fantsonay indray. Mba hanovana ny endritsoratra ao amin'ny iOS 7 izay nakarinay avy tao amin'ny Cydia dia tsy maintsy mandeha any amin'ny "Basic" isika eo amin'ny menio ambany ary misafidy ny endri-tsoratra izay efa nalainay teo aloha. Rehefa te hiverina amin'ny iOS 7 ianao dia safidio ny safidy "Restore BytaFont Backup" na hamafana fotsiny ilay tweak avy any Cydia.
Mampitandrina anao izany fa mila manao a respring manova ny endritsoratra. Tsindrio ny "eny" ary miandry ny famerenan'ny iPad-nao.
Mahay! Efa napetrakao ny endritsoratrao manerana ny fitaovanao.
Fanazavana fanampiny - Ny fisian'ny OS X amin'ny WWDC: "X"
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » BytaFont 2: ovao ny fonon'ny fitaovanao (Cydia)
Ruben luque dia hoy izy:
Rehefa nomeko ny famerenana amin'ny laoniny ny backup backup bytafont dia azoko ny endritsoratra ios 7 tany am-boalohany saika tamin'ny apps / sites rehetra fa amin'ny sasany kosa dia manaraka font iray izay tsy tiako loatra, inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Ruben Luque
Salama ahoana ny zavatra! Nametraka azy aho, ny hany lafiny ratsy ... dia ny tsy ahitanao ny fitendry. Misy vahaolana ve ?? Mirary ny soa indrindra!!